Garsoore Mark Clattenburg Oo Magacaabay SHANTII Ciyaartoy Ee Uu Ugu Necbaa Iyo Afar Premier league Uu kula soo coloobay. – Gool24.Net
Garsoore Mark Clattenburg Oo Magacaabay SHANTII Ciyaartoy Ee Uu Ugu Necbaa Iyo Afar Premier league Uu kula soo coloobay.
14/05/2020 Mahamoud Batalaale
Garsoorihii Premier league ee Mark Clattenburg ayaa soo bandhigay shantii ciyaartoy ee uu ugu necbaa ama uu inta ugu badan u soo cadhooday muddadii dheerayd ee uu ka soo shaqeeyay horyaalka Ingiriiska iyo tartanka kooxaha Yurub ee Champions league.
Mark Clattenburg ayaa caan ku ah in uu yahay garsooraha kaliya ee hal xili ciyaareed wada qabtay saddexda kulan final ee Champions League 2016, Euro 2016 iyo waliba isla finalkii FA-ga ee sanadkaas.
Mark Clattenburg waxa uu ka mid ahaa garsoorayaashii ugu fiicnaa ee FIFA, UEFA iyo FA-ga ee horyaalka Premier league inkasta oo uu qirtay in uu qaladaad soo sameeyay, haddana waxa uu ahaa mid go’aano adag qaadan jjiray.
Waraysi uu bixiyay waxa uu Mark Clattenburg ku magacaabay shantii ciyaartoy ee uu ugu necbaa kuwaas oo qaar ka mid ahi ay gacan ka hadal u gaysteen.
Mark Clattenburg ayaa ciyaartoyda uu necbaa ku soo daray xidigii hore ee kooxaha Liverpool iyo Manchester City ee Bellamy oo uu sheegay in uu xiniinyaha ku qabtay mar ay ka soo baxayeen qolalka labiska ee tunnelka kulan ka dhacay Etihad Stadium.
Ciyaartoyda uu Clattenburg nacaybkooda banaanka keenay waxaa ku jira goolhayihii Arsenal ee Jens Lehmann, difaacii Real Madrid ee Pepe iyo xidigii kooxda Chelsea ee John Obi Mikel, wuxuuna xidiga shanaad noqday halyayga Man United ee Roy Kean.
Ugu horayn garsoore Mark Clattenburg oo ka hadlaya nacaybkii dhex maray isaga iyo Bellamy ayaa yidhi: “Anigu waxaan ogaa in xidhiidh isaga noo dhexeeyay uu ahaa mid dhulka galay kadib markii uu dariiqa tunnelka Etihad uu xiniinyaha qabtay isla markaana anigu isaga ulamaan jeedin kubbadahaygii kulanka”.
Mark Clattenburg oo ka hadlaya John Obi Mikel ayaa yidhi: “Waxaan Mikel u soo qaatay sababteedu waa dhacdadii intii lagu guda jiray kulankii Chelsea iyo Man United ee March 212 kii markaas oo uu aniga igu eedeeyay in aan hadalo cunsurinimo ah ku sameeyay, taas oo aan sax ahayn waxaana kadib cadayeeyay FA-ga”
Mark Clattenburg ayaa qiray in cadaawadii dhex martay isaga iyo John Obi Mikel ay ilaa maanta sii jirto wuxuuna yidhi: “Dhamaan waxay ka tagtay dareen xun kaas oo ilaa maanta sii jira. Mikel waxa kaliya oo uu eedaynta ka maqlay xidiga ay isku kooxda ahaayeen ee Ramires kaas oo aan Ingiriisida ku hadal. Ciyaartoyda kale ee Chelsea tan iyo markaas way iraali galiyeen laamiin waxba kamay iman Mikel”.
Mark Clattenburg oo ka hadlaya sababta uu Roy Keane ugu daray liiska shanta ciyaartoy ee uu ugu necbaa ayaa yidhi: “Aan mar hore iraahdo waxaan roy Keane kula soo shaqeeyay ITV Koobkii Adduunka ee 2018 waxa uu ahaa nin akhyaaq ah oo aad u fiican taasoo cadeyn u ah in ciyaartoyda ay dabeecad kale la soo baxaan marka ay garoonka ku jiraan.
“Sababtoo ah waa ay nagu adkeyd inaan Keane garsoore u noqono. Ma xusuusataa markii uu Andy D’Urso uu ku qeyliyay, Keane waxa uu mar walba handadi jiray garsoorayaasha” ayuu Clattenburg hadalkiisa raaciyay.
Mark Clattenburg oo ka hadlaya goolhayihii Arsenal ee Jens Lehmann ayaa yidhi: “Waxa uu ahaa mid cabasho badan oo aan marnaba joojineynin, waa dadka nolosha xun ee wax walba iyo qof walba ka cawda.
“Haddii kubada ay wareeg tahay wuu cabanayaan, haddii ay kubada cadahay waa uu cabanayaa, waad niyada iska leeyahay bal cabashada mar uun jooji”.
Ugu danbayn garsoore Mark Clattenburg ayaa difaacii Real Madrid ee Pepe ku soo daray shanta ciyaartoy ee uu ugu necbaa wuxuuna yidhi: “Qof walba ayaa i weydiiya dhacdadii finalkii Champions League ee 2016 markaasii aan carabka wareejiyay xilli uu isagu dhulka isku tuuray. Waxaan niyada iska lehee: Sidee nin sidaan u weyn uu jiljileec u muujin karaa?”
Mark Clattenburg oo Pepe ka sii hadalaya ayaa yidhi: “Labo jeer ayuu ciyaartaas dhulka isku tuuray, waxa uu isku dayayay inuu casaan u raadiyo ciyaartoyda Atletico Madrid. Garsoore kale waa uu qiyaami karay laakiin aniga waan soo daawaday ciyaarihiisa, waan ogaa waxa uu sameyn doono iyo sida aan u xalin doono.Waa ciyaaryahan kale oo aadan aamini karin. Ciyaarta oo iska toosan wuxuu sameynayaa qiyaano.
Mark Clattenburg ayaa muujiyay in muddadii uu garsoorka ku soo dhex jiray uu kala jeclaa ciyaartoyda isla markaana ay jireen kuwo uu inta ugu badan u necbaa.